ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၅) | MoeMaKa Burmese News & Media
စီမံကိန်း (သို့မဟုတ်) အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု
အုန်းနိုင် - သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၏ ဂယက် (ဂန္ဓီခန်းမ ကြေညာစာတမ်း ၁၄)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) - ဂိတ်စောင့်သူများနှင့် ချိုးဖောက်သူများ
မြူတိမ်ဝေေ၀ .. တောင်ခိုးဝေးဝေး (၂၄)
ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ - အပိုင်း (၂)
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျင်းပပြီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲများကို စစ်တမ်းထုတ်ကြည့်ခြင်း - အပိုင်း (၇)
ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၅)
မြန်မာပြည်က ရွှေနှင့်မူးယစ်ဆေးတို့၏ ၀ိရောဓိ
မေ ၂၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်က အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ စံပယ်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုဖို့ တနှစ်တနှစ်မှာ ရောက်လာကြတဲ့ ဘုရားဖူးပရိသတ်လူတွေက မနည်းပါဘူး။
ရွှေတိဂုံ ဘုရားကြီးက ဉာဏ်တော်အမြင့် ၈၈ မီတာရှိပြီး၊ ဘုရားကို ရွှေချထားတဲ့၊ ရွှေစင်ရွှေပြားရဲ့အလေးချိန်က မက်ထရစ်တန်ချိန်အနေနဲ့ ၃ တန် ရှိပါတယ်။ ဂျပန်ပြည် ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ ကင်ကာကူဂျီဘုရားကျောင်းမှာပူဇော်ထားတဲ့ ရွှေအလေးချိန်က ကီလိုဂရမ် ၂၀ ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှမနှိုင်းယှဉ်သာပါဘူး။
စိန်၊ ပတ္တမြားနဲ့ တခြားကျောက်မျက်ရတနာပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း စေတီတော်ကြီးအတွင်းမှာ ဌာပနာထားပါတယ်။ စိန်တွေချည်းပဲ အလေးချိန် ၁၈၀၀ ကာရတ်ရှိပြီး စိန်ဖူးတော်က ၇၆ ကာရက်အလေးချိန်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် (ဘုရားဆီကဖြာထွက်နေတဲ့ ရွှေရောင်၊ စိန်ရောင်တွေဖြာထွက်နေမှုကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာ နေ့အလင်းရောင်မပြောနဲ့ ညအမှောင်ထဲမှာတောင် ရင်သက်ရှုမောရလောက်အောင်လှတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘုရားကိုရွှေချထားတဲ့ ရွှေပြားတွေဟာ ကွာကျကုန်လို့ မှန်ဘီလူးနဲ့ အနီးကပ်ဖူးမြော်ကြည့်ရင် စေတီတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ထည်ပေါ်မှ ရွှေကွာနေတဲ့ အကွက်အပျောက်တွေကို အထင်းသားမြင်ရပါတယ်။
“လေထန်တဲ့အခါ ရွှေပြားတွေ၊ သတ္တုပြားတွေကွာကျ၊ လွှင့်ကျကုန်တာပေါ့။ ဆိုင်ကလုန်းတိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင် ရွှေအစအနတွေက အနီး က ရွှေတိဂုံကုန်းတော်တ၀ိုက်မှာလွှင့်ကျနေတယ်” လို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် အရာရှိတယောက်က ပြောပြပါ တယ်။
ဒါကြောင့် ဘုန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ဂေါပကတွေကို ရွှေတိဂုံဘုရားကို ရင်ပြင်တ၀ိုက်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့၊ ရွှေချထားတဲ့အပြားတွေ၊ ရွှေ စင်ရွှေပြားတွေက အစအနတွေကို ပြန်သိမ်းဆည်းဖို့ တာဝန်ပေးထားပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို ပြန်လည်မွမ်းမံတဲ့အချိန်တုန်းက ရွှေချထား တဲ့ ရွှေပြားတွေနဲ့ ရွှေစင်ရွှေပြာပေါင်း ၄၀၀၀ ကို လင့်ဟာနေတဲ့နေရာတွေမှာ ပြန်ပူဇော်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမတိုင်ခင် ၅ နှစ်လောက် ပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ နေ့စဉ် ဘုရားကိုယ်ထည်ပေါ်ကနေ ရွှေပြားနှစ်ပြားနှုန်း ကွာကျနေတယ်လို့ ပြန်တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
“အကယ်၍ ကွာကျလာတဲ့ရွှေပြားကို တယောက်ယောက်ကကောက်ယူသွားရင် အဲဒီလူကို အရေးယူအပြစ်ပေးတတ်သလား”လို့ သာသနာ ရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိကို ကျနော်မေးကြည့်တော့ အဲဒါမျိုးဖြစ်ရင် ဘုရားက ရွှေပြားကိုပဲ ပြန်သိမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကတော့ ဘုရားရွှေပြားကိုတွေ့ရင် ဂေါပကကိုပြန်အပ်ပါတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ ဘုရားကရွှေတွေကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေက လှူဒါန်းထားကြတာပါ။
လူတွေသေလွန်တဲ့အခါ ၀ိညာဉ်ဟာ တမလွန်ဘ၀တခုကို ကူးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားပါတယ်။ ထေရ၀ါဒကိုးကွယ်သူတွေဟာ နောင်ဘ၀မှာ ကောင်းဖို့ရည်စူးပြီး ဘုရား၊ သံဃာတွေကို အလှူအတန်းပေးရတာကို သဒ္ဓါတရားထက်သန်ကြပါတယ်၊။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ ဒီရေမြင့်သစ်လှုပ်ရှားမှုကြီးအပြီးမှာ အစိုးရအာဘော်သတင်းစာတွေမှာ ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သံဃာတော်တွေကို အလှူအတန်းပြုတဲ့သတင်းတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက အကြီးအကျယ်ဝါဒဖြန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေက ဒီသတင်းတွေကို အပြုသဘောနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
“လူတွေက စစ်အစိုးရကို ဘယ်လောက်ပဲမုန်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အစိုးရအကြီးအကဲတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ညိုတာကို တွေ့ရတော့ လည်း လူတွေက သာဓုခေါ်ကြတာပါပဲ” လို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ လေ့လာရေးဌာန Institute of Developing Economies ရဲ့ အရှေ့တောင် အာရှလေ့လာရေးအဖွဲ့ ၂ က ညွန်ကြားရေးမှူး တိုရှိဟီရို ကူဒို Toshihiro Kudo က ပြောပါတယ်။
“အနီရောင်ရယ်၊ အစိမ်းရောင်ရယ်၊ အမည်းရောင်ရယ်၊ ဒီအရောင်သုံးရောင်ကိုပိုင်တဲ့လူဟာ မြန်မာပြည်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်” လို့ အဆိုရှိတဲ့ အကြောင်း စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်းရေးတဲ့ စာရေးဆရာ ဟိုက်ဒီ ယူကီ တာကာနို Hideyuki Takano က ပြောပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အနီ ရောင်က ပတ္တမြား၊ အစိမ်းရောင်က ကျောက်စိမ်း၊ အမည်းရောင်ကတော့ ဘိန်းကိုဆိုလိုတာပါ။ မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ဘိန်းအများဆုံးထုတ်ရာ နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းက လားရှိုးမြို့ကိုသွားပြီး ဘိန်းရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိန်းဆိုတာက သကြား လုံးလေးတွေပုံမျိုး၊ အမည်းရောင် ဘိန်းသီးလေးတွေကနေ ထုတ်တာပါ။ သန့်စင်လိုက်ရင်တော့ ဘိန်းဖြူဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘိန်းက နဂိုက အမည်းရောင်ဖြစ်သလိုပဲ၊ မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာပဲ လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကြတဲ့ အမည်းရောင်နိမိတ်ပုံရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့ ဆိုရ မှာပါ။
ဘိန်းက လူတွေကိုဆွဲဆောင်ထားပုံနဲ့ ဘုရားက အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ရွှေတွေက လူတွေကိုဆွဲဆောင်ပုံကတော့ တခြားစီပါ။ ဒါပေမယ့် မော်ဖင်းလို့ခေါ်တဲ့ နာကျဉ်မှုကိုသက်သာစေတဲ့ဆေးကိုလည်း ဘိန်းကပဲထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဘိန်းကတော့ စွယ်စုံသုံး၊ တန်ရင်တော့ဆေး၊ လွန်ရင်တော့ ဘေးဖြစ်စေတဲ့ အဆိပ်တမျိုးပါပဲ။
မူးယစ်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသကတော့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအိုတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် နယ်ခြားဒေသဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်က တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းပြောရင် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (စီအိုင်အေ) ရဲ့တာဝန်ကလည်း တော့်တော့်ကိုမကင်းတာပါ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့နောက်မှာ တရုတ်အမျိုးသားဝါဒီပါတီဝင် အကြွင်းအကျန်တွေဟာ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ထွက် ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကို ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပ်အဖြစ်နဲ့ အမေရိကန်စီအိုင်အေက မွေးခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ရေးအတွက် အရင်း အမြစ်အဖြစ် ဘိန်းကို စီအိုင်အေကရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ စီအိုင်အေက အဲဒီဒေသကနေ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အခါမှာတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုတွေက ဘိန်းလုပ်ငန်းကို လက်ပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရက မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု၊ မူးယစ်ကုန်သည်တွေကို နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို ထိန်းချုပ် နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို တိုင်းပြည်ပြိုကွဲမယ့်အန္တရာယ်အဖြစ် အစိုးရကမြင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာပြည် ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အမည်းရောင်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
“ဘိန်းစိုက်ပျိုးရေးက တောင်တန်းဒေသက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ဘ၀တွေအတွက် ငွေရှာဖို့ အလွန်ထိရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲ” လို့ သံတမန်တဦးက ပြောပါတယ်။ ဒါကိုသိတဲ့အတွက် အစိုးရကလည်း ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတွေကိုမစိုက်နိုင်ခင် ကြားကာလတခုမှာ တိုင်း ရင်းသားတွေ ဘိန်းစိုက်ချင်စိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့ အတိုင်းအတာတခုအထိ ခွင့်ပြုထားတာလည်းရှိပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ အစိုးရက တိုင်းရင်းသားတပ်တွေရဲ့ တရားမ၀င် ကာစီနိုလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေ၊ ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေနဲ့ နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးတို့လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါတယ်။
ဒီလို ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေ အတော်များများ အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပေါ်လစီတွေကို ဦးဆောင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်က ရာထူးကနေ ဖြုတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာ အစိုးရဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ တရားမ၀င်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြန်ပြီး ကိုင်တွယ်လာပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေကို တားဆီးဖို့ပါ။
အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတပ်တွေအကြားက ထိပ်တိုက်တွေ့မှုတွေ ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေလည်း ပုံမှန်လို ပြန်ဖြစ် လာပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနဲ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကလည်း အရင်ထက်ပိုတိုးလာပါတယ်။
“ဒီလိုတိုးလာတာဟာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြင်းထန်လာတာနဲ့ အများကြီးပတ်သက်ပါတယ်” လို့ သံတမန်က ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသွားတွေ အာရုံကျတဲ့ ရွှေတြိဂံဒေသရဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေကလည်း ဆိုးလားပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ခရီးစဉ်မှာ အဲဒီဒေသကို သွားဖို့ အာဏာပိုင်တွေကခွင့်မပြုလို့ မရောက်လိုက်ရပါဘူး။
အဲဒီဒေသကို ရွှေတြိဂံလို့ ခေါ်ကြတဲ့ နောက်အကြောင်းတခုက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို ငွေနဲ့ အရောင်း အ၀ယ်မလုပ်ကြပဲ ရွှေနဲ့ပဲ အလဲအလှယ်လုပ်တာကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီဒေသမှာ ရွှေနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာက ဒင်္ဂါးပြားရဲ့ ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲ ခွဲခြားလို့မရအောင်ပါပဲ။
လားရှိုးမြို့မှာ ရောင်စုံရိုးရာဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ လမ်းအတိုင်းလျှောက်ရင်း ဆေးဆိုင်တွေ တဆိုင်ဝင် တ ဆိုင်ထွက် ဘိန်းရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောနာတာကိုကုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ ဘိန်းပါတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတမျိုးရှိပါသလားလို့ ဆိုင်တွေမှာ လိုက်မေးတဲ့အခါ မရှိဘူးလို့ချည်း ပြန်ဖြေကြပါတယ်။
ကျနော်နဲ့လိုက်လာတဲ့ ဧည့်လမ်းညွန်က လားရှိုးမှာ ဘိန်းရှာပုံတော်ဖွင့်တာကို လက်လျှော့လိုက်ဖို့ စည်းရုံးရှာပါတယ်။ လားရှိုးက အစိုးရရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေလို့ပါတဲ့။
တကယ်တော့ လားရှိုးမှာ ဘိန်းပါတဲ့ဆေးဝါးကိုရှာရတာ မြန်မာပြည်က စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတဲ့စာအုပ်ကို လိုက်ရှာသလိုပါပဲ။ အစိုးရကတော့ ဘိန်းကိုရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရော၊ မှောင်ခိုလောကရဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့အရာတွေလို့ သတ်မှတ်ထား တာပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာခင်တုန်းကပဲ အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ချဉ်းကပ်လာပါတယ်။
“မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အစိုးရကြားမှာ သင့်မြတ်မှုရအောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသွေးပါတဲ့ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် တယောက်တည်းပဲရှိတယ်” လို့ ရန်ကုန်မြို့က အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အိုင်တီကုမ္မဏီရဲ့ဥက္ကဌက ပြောပါတယ်။ အ ကြောင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အစိုးရတို့ကြားမှာ သင့်မြတ်ရေးရဖို့ အလေးထားလုပ် ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် အစိုးရအနေနဲ့ “တိုင်းရင်းသားတပ်တွေ” ဆိုတဲ့အဆိပ်ကို အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အဆိပ်ကိုသုံးပြီး ထိန်းနိုင်မလား။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်အတွက် ဖြေဆေးဖြစ်မလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
မိုင်နီချီ ရှင်ဘွန်းမှာပါတဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။
The contrast between gold and drugs in Myanmar
Takayuki Kasuga (Mainichi Japan)
Shwedagon Pagoda in Yangon, the largest city in Myanmar, has attracted many people over the years to admire its beauty. More than three metric tons of gilts and gold plates are attached to the surface of the 99-meter-high structure. They are far heavier than those attached to Kinkakuji Temple in Kyoto, which weigh 20 kilograms.
Moreover, 80,000 jewels, including diamonds and rubies, are embedded in the structure. The diamonds alone total 1,800 carats, includinga76-carat one at the top of the pagoda.
It is widely said that truly beautiful women are striking in the daytime and also remain stunning even in darkness. However, many parts of the gilts and gold plates that have fallen off its walls look like freckles and blotches if viewed with binoculars.
“If it’s windy, gilts and metal plates can fall off and are blown away. Fragments of gold are often blown across the mountain by cyclones,” saysa55-year-old official with the Ministry of Religious Affairs.
Therefore, monks and servicemen assigned to the pagoda patrol neighboring areas and collect loose fragments of gilts or gold plates. A total of 4,000 gilts and gold plates were replaced when the pagoda was refurbished in 2005 for the first time in five years. That means that on average two of the plates or gilts came offaday over the five-year period.
I asked the official, “If someone picked up gold fragments and stole them, would they be punished?
He replied, “I suchacase, we only confiscate the fragments. Ordinary Buddhists who find such fragments usually hand them over to us.”
The gold used for the pagoda was donated by faithful Buddhists.
The transmigration of souls is the core of the concept of life and death for Theravada Buddhism that is prevalent in Myanmar. Followers are enthusiastic about extending donations, which are recognized as merit, to the pagoda and monks in an effort to haveabetter afterlife. Since pro-democracy movements surged in 1988, state-owned media outlets have reported every single donation that top officials in the military regime extended to monks. Needless to say, it is ofahighly propaganda nature. However, the public appears to have reacted positively to such news.
“The public welcomes top officials’ devout adherence to Buddhism even though they hate the military regime,” says Toshihiro Kudo, director of Southeast Asian Studies Group II of the Institute of Developing Economies.
Is Suu Kyi poison or medicine?
It is said that “Those who conquer red, green and black can control Myanmar,” according to adventurer-writer Hideyuki Takano. Red refers to ruby and green is jade, while black means opium. Myanmar is known as one of the world’s largest producers of these items.
I visited Lashio in the eastern state of Shan to look for opium. Opium, made from opium poppies, are black balls that look like candies. They can be made into heroin if purified. Opium is black in terms of its color but also hasadark image as it is an illegal drug traded secretly. The drug attracts many people inaway completely different from that of sacred golden pagodas.
However, morphine that is used asapainkiller can also be extracted from opium. In this area, opium has been regarded as all-purpose cure and can be both medicine and poison.
The so-called Golden Triangle, which became notorious as an area of drug production, is situated in southern Shan and close to Myanmar’s border with Thailand and Laos. The U.S. Central Intelligence Agency (CIA) is responsible largely for making the State of Shanamajor supplier of illegal drugs. The CIA supported remnants of the Chinese Nationalist Party — who fled to Sham after losing their fight against the Chinese Communist Party — as an anti-communist front. The CIA chose opium asasource of funding to support them. After the CIA pulled out of the area, ethnic minorities took over the opium concession.
Myanmar’s regime has cracked down on drug producers and traffickers inabid to contain ethnic minorities’ militias that it fears posesathreat to the unity of the nation. In other words, it wasa“fight to conquer ‘black’ to control Myanmar.”
“Growing opium poppies are effective sources of money to support the tough lives of mountain minority tribes,” saysadiplomatic source. In view of such circumstances, the regime at one point allowed ethnic minorities to grow opium poppies as an interim measure while trying to enable them to grow substitute agricultural goods. At the time, the regime also gave tacit approval to ethnic minorities’ militias to operate illegal casinos, brothels and trade across national borders.
Asaresult of these conciliatory moves, the regime reachedacease-fire accord withamajority of armed ethnic minority groups. Seven years ago, the then prime minister who led the conciliatory policy was unseated, and the regime revived its hard-line stance to ban armed ethnic minority groups from producing drugs or operating illegal businesses.
As the confrontation between the government and the militias intensified, armed conflicts have recently occurred sporadically. The amount of opium poppies grown in Shan and opium produced there has increased.
“The rise corresponds with the intensification of the militias’ activities,” says the diplomatic source.
Security in the Golden Triangle, which has becomeatourist spot, has worsened and I was unable to gain permission from authorities to enter the area during my latest visit.
I also learned that the area is called “Golden Triangle” because drugs are exchanged for gold, not cash. In fact, drugs and gold are two sides ofacoin in the area.
I walked around Lashio, which is full of women dressed in colorful folk costumes, and visited drugstores to ask if they sold traditional medicine containing opium that is effective in curing backaches. However, all storekeepers showed negative reactions.
A tour guide accompanying me tried to persuade me to abandon looking for opium in Lashio “because this area is under government rule.”
Actually, asking drugstores in the area if they have medicine containing opium is just like asking bookstores in Myanmar if they have books authored by Aung San Suu Kyi. The regime regards both opium and Suu Kyi as poisonous existences in the underworld.
However, the regime has recently approached Suu Kyi inabid to open dialogue. As for the reason for the move,a35-year-old president ofaYangon-based mobile phone company says, “Suu Kyi, who has Gen. Aung San’s bloodline, is the only person who can persuade ethnic minorities to reconcile with the government (because the general devoted himself to efforts to build up cooperation between the government and ethnic minorities).”
Can the regime control the “poison” of militias with the “poison” of Suu Kyi, and will Suu Kyi become medicine for Myanmar? (By Takayuki Kasuga, Foreign News Department)
(Mainichi Japan) January 24, 2012
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:အခန်းဆက်များ
One Response to ဂျပန်သတင်းထောက်တဦး၏ မှတ်စုများ – အပိုင်း (၅)
ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး) on May 3, 2012 at 5:54 pm
မူလ စာရေးဆရာ ရဲ့ အာဘော်၊ အကြောင်းအရာတွေတင်မကပဲ ဘာသာပြန်သူက မြန်မာ ဝေါဟာရတွေကို အဆင်ပြေပြေ ရွေးခြယ် သုံးနှုန်းပုံပါ ကောင်းပေတယ်ဗျာ။